Ma awoodid inaad aragto Maqnaanshaha Xiliga 4 - Madadaalo
Ma awoodid inaad aragto Maqnaanshaha Xiliga 4
Waa maxay Xiliga oo dhan?
Aan Ognahay Jilayaasha Maqnaanshaha
Waa maxay Masiirka Maqnaanshaha Xiliga 4?
Absentia waa riwaayad taxane ah oo Mareykan ah oo laga sii daayay AXN Sebtember 25, 2017. Stana Katic, Matthew Le Nevez, iyo Patrick Heusinger ayaa ka soo muuqday taxanaha, kaasoo uu daadihiyo Oded Ruskin. Taxanaha ayaa dib loo cusboonaysiiyay xilli labaad bishii Juun 19, 2018. Xiliga labaad waxa uu ka furmay AXN bishii March 26, 2019, iyo Juun 14, 2019 gudaha Maraykanka. Taxanaha waxaa dib loo cusboonaysiiyay xilli saddexaad bishii Luulyo 2, 2019, oo leh taariikhda ugu horreysa ee Luulyo 17, 2020. Maajo 7, 2021, waxaa shaaca laga qaaday in taxanaha 'horay loo daabacay xilli saddexaad uu dhammaaday.
Taxanuhu waxa uu daba socdaa wakiilka gaarka ah ee FBI-da Emily Byrne, oo la waayay xilli ay baadi goob ugu jirtay mid ka mid ah gacan ku dhiiglayaasha ugu caansan Boston oo lagu dhawaaqay in ay dhimatay iyada oo maqan. Lix sano ka dib, waxaa laga helay qol kaynta ku dhex yaal, iyadoo nool oo dirqi ah oo aan dib loo xasuusan waayideeda. Waxay timaaddaa guriga si ay u ogaato in ninkeeda uu dib u guursaday iyo in naagta cusubi ay korsanayso ubadkeeda, waxayna si degdeg ah u gashay dilal hor leh.
Stana Katic Wuxuu ciyaaray doorka wakiilka gaarka ah Emily Byrne
Waa wakiilkii hore ee FBI-da oo la waayay intii lagu guda jiray raadinta mid ka mid ah gacan ku dhiiglayaasha ugu caansan Boston waxaana loo maleeyay inay dhimatay, laakiin waxay dib u soo baxday lix sano ka dib iyada oo aan dib loo xasuusan afduubkeeda. Iyadoo isku dayaysa inay dib u dhisto nolosheeda oo ay xaliso sirta afduubkeeda, waxay noqonaysaa tuhmanaha koobaad ee dilalka cusub ee naxdinta leh waxaana lagu qasbay inay dalka ka baxdo.
Dariiqa Theobold Wuxuu ciyaaray doorka Alice Durand
Flynn hooyadeed iyo xaaska cusub ee Nick. Alice waxay isku daydaa inay noqoto mid naxariis badan oo wanaagsan, laakiin iyada oo ku dhex jirta buuqa ka dib imaatinka gurigeeda, waxay si sii kordheysa uga sii adkeysaneysaa Emily, iyadoo dareentay inay khatar ku tahay Flynn oo ay lumiso daacadnimada Nick.
Patrick Heusinger Wuxuu ciyaaray doorka wakiilka gaarka ah Nick Durand
Xaaska Emily iyo wakiilka gaarka ah ee FBI-da oo dareemaya dambiga ah inay ka tageen raadinta Emily. Waxa uu isku dayaa in uu isku dheelitiro inta u dhaxaysa guurkiisa cusub ee Alice iyo Emily dib u soo kabashada iyo soo noolaynta jacaylka iyada. Ka dib markii Emily uu cararo, wuxuu lumiyaa rumaysad la'aanteed, ka dib markii qoyskiisa loo hanjabay, wuxuu si ba'an u raacaa iyada.
Neil Jackson Wuxuu ciyaaray doorka Jack Byrne
Emily walaalkii ka weynaa (kadib markii la korsado), dhakhtar hore oo lumiyay xirfadiisa iyo shatiga caafimaadka sababo la xiriira walaaca maqnaanshaha Emily, taasoo keentay cabitaano badan. Waxa uu u shaqeeyaa iibiye sahayda caafimaadka xilliga ugu horreeya. Ka dib markii uu dib u helay shatiga caafimaadka xilli ciyaareedkii labaad, wuxuu bilaabay inuu u shaqeeyo EMT iyo kalkaaliye caafimaad isagoo rajaynaya in dib loogu soo celiyo dhakhtar caafimaad ahaan.
Angel Bonani Wuxuu ciyaaray doorka Baaraha Tommy Gibbs
Waa kuma baaraha hamiga leh ee hamiga leh ee Bilayska Boston ee masuulka ka ah baadhista dilka ee Emily, taas oo dabadeed la shuraakoowday Nick si ay u daba galaan Emily.
Christopher Colquhoun Wuxuu ciyaaray doorka wakiilka gaarka ah Derek Crown
Dhimashadii Radford ka dib, wakiilka gaarka ah ee FBI-da iyo Emily iyo saaxiibkiis Nick waxa la gaadhsiiyay wakiilka gaarka ah ee masuulka ka ah xafiiska. Waxa hoos loo dhigay oo lagu beddelay Julianne Gunnarsen taxanaha dambe, laakiin dib ayaa loo dalacsiiyay ka dib markii Gunnarsen loo xidhay musuqmaasuq iyo dil gebagebadii.
Natasha yar Doorkii ayuu ciyaarayWakiilka gaarka ah Julianne Gunnarsen
Waa kee xubin cusub oo ka tirsan Wakaalada Field Boston oo si weyn loogu tixgaliyo inuu yahay shaqsiga ugu weyn ee FBI-da oo ku biiray xafiiska kadib weerar argagixiso oo dilaa ah oo ka dhacay Boston. Ka dib waxaa loo dalacsiiyay Wakiilka Gaarka ah ee Mas'uulka Xafiiska, iyadoo badashay Crown. Ka dib markii xiriirkeeda ay la leedahay shabakad dambiilayaal caalami ah oo la shaaciyay, ugu dambeyntii waxaa lagu xiray dhamaadka taxanaha dhowr fal oo musuqmaasuq ah, oo uu ku jiro dilka Alice.
Taxanaha wali lama tirtirin ama cusboonaysiin Amazon. Siyaabo kale, maqnaanshaha burinta ayaa faa'iido leh. Si kastaba ha ahaatee, mashruuca ayaa u muuqda in si qarsoodi ah loo joojiyay.
Ku socotaa #MAAQAANNIMO Wolfpack : pic.twitter.com/JTQ1fQFo55
Kani waa barnaamij aad u adag in dib loo cusboonaysiiyo. Bandhigu wuxuu ku bilaabmay si taxane ah oo AXN ah, iyadoo Amazon ay heshay xuquuqaha gudaha Maraykanka. Waa mid ka mid ah taxanahaas oo aan isla markiiba ku socon adduunka oo dhan Amazon sababtoo ah heshiisyada shatiga ee shabakadaha kala duwan ee adduunka. Tani waxay ka dhigi kartaa dib u cusbooneysiin mid aad u adag. Waqtigan xaadirka ah, uma muuqato in xilli afaraad la soo saari doono. Xiliga 3-aad ee Maqnaanshaha ayaa looga dooday gudaha Mareykanka Julaay 10, 2020. Ma aanan maqal wax ku saabsan mustaqbalka bandhigga tan iyo markaas, dhammaan jilayaasha iyo shaqaaluhuna waa ay ka aamuseen mowduuca.
Waa wax laga xumaado in wax laga akhriyo dhammaadka Maqnaanshaha. Laakiin marka aan halkan joogno uma baahnid inaad wax ka walwasho, waxaad ka boodi kartaa boggayaga internetka oo aad akhrin kartaa macluumaadka cajiibka ah ee ku saabsan taxanaha iyo filimada aad jeceshahay inaad daawato.
Documentary-Oscar loo magacaabay:Maraykanka Vs Billie Holiday
goobaha filimada shineemada bilaashka ah ee ugu fiican
daawo filimada qulqulka lacag la'aan
xbox dahab dahab ah oo bilaash ah
app si aad u daawato bandhigyada tv -ga bilaashka ah
heesaha heesaha si aad u dhageysato muusikada